शीर्ष 10 टेस्टोस्टेरोन एस्टर: जो तपाईंको लागि सही छ? | AASraw
/ब्लग/ग्यालरी/शीर्ष 10 टेस्टोस्टेरोन एस्टर: जो तपाईंको लागि सही छ?
प्रकाशित 12 / 18 / 2018 by 阿斯劳 मा लेखियो ग्यालरी.
टेस्टोस्टेरोन एस्टेटरले वास्तविक टेस्टोस्टेरोन अणुको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ जुन यसमा संलग्न कार्बन श्रृंखलाहरू छन्। कार्बन चेनले तपाईंको रक्तचापमा दबाइ को घुलनशीलता सरल विभाजनमा विभाजन गुणांक नियन्त्रण गर्छ। पानीमा लागू औषधि को घुलनशील कार्बन श्रृंखलाको आकारले एस्टेर समावेश गर्दछ। लामो कार्बन चेन्ज लामो एस्टर र एस्टर लामो लामो छ, पानीमा दबाइको कम घुलनशीलता। उदाहरणका लागि, टेस्टोस्टेरोन propionate तीन कार्बन चेन सीसी बनाइएका एस्टर हुन्छ। सामान्यतया, यसको अर्थ यो हो कि यसमा तीन कार्बन चेनहरू छन् टेस्टोस्टेरोन एस्टर.
Wटोप टेस्टोस्टेरोन एस्टर छs?
टेस्टोस्टेरोन एस्टर विषय धेरै मानिसहरूमा भ्रामक भएको छ, र धेरै विद्वानहरु द्वारा विस्तृत विवरण को बाहेक तपाईं एक स्पष्ट परिभाषा को कम गर्न सक्नुहुनेछ। साधारण शब्दहरूमा, तपाइँलाई पहिलेको आवश्यकता छ कि यो थाहा पाउनु अघि एस्टेर हो कि यो टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन संग संयोजन गर्न को लागी अगाडी बढ्नु हो। एस्टर एक, दुई वा तीन कार्बन चेनबाट बनेको एक रासायनिक प्रतिक्रिया हो। एन्सरको आकार वास्तवमा कार्बन चेन्जहरूको संख्याको परिणामको रुपमा हो। अब तपाइँ टेस्टोस्टेरोन एस्टर्सलाई बुझ्न त्यही सिद्धान्त लागू गर्न सक्नुहुन्छ। माथिको वर्णन अनुसार साना एस्टरहरूसँग कम कार्बन चेनहरू पानी र रक्त पनि घुलनशील हुन्छन्।
तपाईंको शरीरले प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन निर्माण गर्न सक्दछ जुन यौन ड्राइव र मांसपेशी भवनको लागि प्रायः जिम्मेवार छ। विभिन्न स्वास्थ्य कारणहरूको कारण निम्न टेस्टोस्टेरोन उत्पादन भएका व्यक्तिहरूको लागि, टेस्टोस्टेरोन थेरेपीको लागि जान सकिन्छ। यहाँ डाक्टरले धेरै टेस्टोस्टेरोन एस्टेकर ड्रग्सको वर्णन गर्न सक्दछ जुन पछि उनीहरूले तपाइँको रगतसँग मिल्दो र प्राकृतिक पछाडि समान परिणाम दिन्छन्। तपाईं उमेरको रूपमा, टेस्टोस्टेरोन उत्पादन स्तर तल जान्छ। हार्मोन स्तर सामान्यतया वयस्कता र किशोरावस्थाको समयमा उच्च हुन्छ।
35 XNUMX बर्षको उमेर र माथिको शरीरमा टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको तह तल जान थाल्छ यद्यपि हाइपोगोनैडिजमजस्ता बिरामीहरूले यसलाई निम्त्याउन सक्छ। टेस्टोस्टेरोन एस्टर साइड इफेक्टहरू पनि एक प्रकारबाट अर्कोमा फरक हुन्छन्, तर बहुमतले समान प्रभाव साझा गर्दछ। उदाहरण को लागी, इंजेक्शन क्षेत्र को लागी इंजेक्शन क्षेत्र को सूजन सामान्य छ जबकि अन्य प्रभावहरु मा टाउको दुख्ने, अनिद्रा र कहिलेकाँही लामो eretions समावेश गर्दछ।
हामीलाई टेस्टोस्टेरोन चाहिन्छ?
टेस्टोस्टेरोन सामान्यतया पुरुष हार्मोन को रूप मा जनाइएको छ। के धेरै व्यक्तिलाई थाहा छैन कि दुबै पुरुष र महिलाले हर्मोन उत्पादन गर्छन्। टेस्टोस्टेरोन एक एन्ड्रोजन हार्मोन हो जसले तपाईंको शरीरमा पुरुष विशेषताहरू उत्पन्न गर्दछ। यो तपाईंको शरीरमा एक स्थानमा उत्पादन गरिएको छ रगत प्रवाहको माध्यमबाट अन्य शरीरका भागहरूमा यात्रा गर्दछ। हार्मोन निम्नलिखित क्षेत्रहरुमा निर्मित हुन्छ;
महिलाहरु को यसको अंडा मा उत्पादित छ
एड्रेनाल ग्रंथहरु जुन पुरुष र महिला दुवै मा उपलब्ध तपाईंको गुर्दे मा स्थित छ।
महिलाहरूको तुलनामा पुरुषहरूमा टेस्टोस्टेरोनको स्तर उच्च छ। या तो लिङ्गमा टेस्टोस्टेरोन असंतुलनले गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ जुन समस्यामा उपचार भएको छैन भने खराब हुन सक्छ।
टेस्टोस्टेरोन एस्टर्स चार्ट
50-100mg प्रति दिन
सकारात्मक प्रभाव सुधारिएको ऊर्जा
Proviron र Nolvadex
ClomiGen र NolvaGen
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट र टेस्टोस्टेरोन एन्थनेट
टेस्टोस्टेरोन एन्थेटेट 315-37-7
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट 58-20-8
औसत खुराक 250-750 प्रति हप्ता
आधा जीवन 2-3 सप्ताह
पानी अवधारणा हो
कार्य विलम्बित प्रभावहरू
सकारात्मक प्रभाव ऊर्जा बढ्यो
साइड इफेक्ट कपाल हानि, मुँहासे, पानी अवधारण र टेस्टिकुलर एट्रोफी।
सुरक्षा Nolvadex को एक ट्याब र दैनिक proviron
पुन: 1 दिनको लागि क्लोमेड 20 ट्याब
टेस्टोस्टेरोन डिकोनोनेट र टेस्टोस्टेरोन Isocaproate
टेस्टोस्टेरोन डिकोनोनेट 5721-91-5
औसत खुराक 50-100mgs प्रति दिन
आधा जीवन Decanoate, 3-4 हप्ता
Isocaproate2हप्ता
पानी अवधारणा न्यूनतम
कार्य अस्वीकार --अन्तर्गत
सकारात्मक प्रभाव सुधारिएको ऊर्जा, कडा मांसपेशिहरु र बलियो लाभ।
साइड इफेक्ट कपाल हानि, जुनेकोमास्टिया, मुँहासे र टेस्टिकुलर एटोफिक
सुरक्षा चक्रमा नोलवाडक्स र प्रोयरिरोनको 1 ट्याब
पुन: उपचारको अन्तिम दिन 1 दिनको लागि क्लोमेड -20 ट्याब दैनिक।
HCG 2500-5000IU साप्ताहिक, तपाईंको उपचार चक्रको अन्तिम दिन पछि 20days।
टेस्टोस्टेरोन अज्ञात (इंजेक्शन योग्य)
आधा जीवन धेरै लामो
औसत खुराक 1000mg / 14 हप्ता
कार्य धेरै लामो
सकारात्मक प्रभाव राम्रो रिकभरी, राम्रो vascularization, ऊर्जा वृद्धि, र मांसपेशी बल
साइड इफेक्ट मुँहासे, कपाल हानि, testicular atrophy र gynecomastia।
सुरक्षा भरपूर उपचार चक्र मा प्रोरेयरन र नोल्वेक्सक्स को 1 ट्याब
पुन: क्लोमेड - एक ट्याब्लेट दैनिक उपचार चक्र पछि 20 दिनको लागि।
औसत खुराक 250mg / साप्ताहिक
आधा जीवन 1-3 सप्ताह
कार्य छिटो र छोटो
सकारात्मक प्रभाव राम्रो रिकवरी, शक्ति र मासु मांसपेशिहरु लाभ, सुधार ऊर्जा, र बेहतर vascularization।
साइड इफेक्ट कपाल हानि, मुँहासे, जिनेकोमास्टिया र टेस्टिकुलर एट्रोफी।
सुरक्षा Proviron र Nolvadex - 1 ट्याब / दिन तपाईंको उपचार चक्रमा
चक्र पछि 1 दिनको लागि क्लोमेड- 20 ट्याब दैनिक
HCG- तपाईंको चक्र पछि 2500-5000 IU बाट प्रत्येक दिन 20 दिनको लागि कुनै पनि खुट्टा लिनुहोस्।
शीर्ष 10 टेस्टोस्टेरोन एस्टरहरू के हो?
असंतुलित टेस्टोस्टेरोनको समाधान तपाइँको निकटतम क्लिनिक बाट चिकित्सा सहायता खोज्न हो। टेस्टोस्टेरोन अस्टर्स तपाईंको कम टेस्टोस्टेरोन र मांसपेशिहरु को निर्माण को लागी प्रयोग गरिने मानक ड्रग हो। बजारमा उपलब्ध विभिन्न टेस्टोस्टेरोन एस्टेर्सहरू छन्, तथापि, केवल काउन्टरमा उनीहरूको खरीद नगर्ने, तपाईंको डाक्टरबाट सही नुस्खा पाउनुहोस्। टेस्टोस्टेरोन एस्टेहरू प्रायः एथलीटहरू र बडी बङ्गलादेशहरू द्वारा प्रयोग गरिएका छन् जुन उनीहरूको शरीरको मासुको निर्माण गर्न चाहन्छन्। केहि प्रमुख टेस्टोस्टेरोन एस्टरहरू निम्न हुन्।
1. टेस्टोस्टेरोन Acetate
टेस्टोस्टेरोन एसीटेट चिकित्सा क्षेत्र मा शुरू हुन पहिलो टेस्टोस्टेरोन एस्टर मध्ये एक हो। यो पहिलो पटक १ 19362मा निर्धारित गरिएको थियो। टेस्टोस्टेरोन एसीटेट एक द्रुत-अभिनय गर्ने औषधि हो जुन पुरुष टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको रूपमा आउँदछ। यो तपाईंको रक्त प्रवाहमा छिटो विघटन गर्दछ जुन यसले धेरै बिरामीहरू वा एथलीटहरूको लागि आदर्श बनाउँछ। अनुप्रयोगमा, एसीटेट एस्टरले केहि समय लिन सक्ने अन्य टेस्टोस्टेरोन एस्टरको विपरित कार्य गर्न सुरू गर्दछ। छोटो टेस्टोस्टेरोनले एस्टरको आधा जीवनको कारणले, तपाईले टेस्टोस्टेरोनको स्तर कायम गर्न प्रत्येक २ देखि days दिन पछि कम खुराक लिन आवश्यक पर्दछ जुन उतार-चढावको विषय हो।
टेस्टोस्टेरोन एसीटेट इन्जेक्शन पनि दुखाइ हुन सक्छ र इंजेक्शन क्षेत्रमा सुजन वा असुविधाको लागी नेतृत्व गर्न सक्छ। नयाँ-प्रयोगकर्ताहरू कहिलेकाहीँ केही समयको लागि केही दुखाइ अनुभव गर्नेछन्, तर तपाईंको शरीरले खुट्टाहरूमा प्रयोग गरेपछि, तपाईं ठीक हुनेछ। यद्यपि, यदि प्रभावहरू जारी राख्नुहुन्छ भने वैकल्पिक डोज विकल्पहरू प्रदान गर्न तपाईंको डाक्टरलाई सूचित गर्नुहोस्।
टेस्टोस्टेरोन Acetate dosage
टेस्टोस्टेरोन एसीटेट खुराक तपाईंको अवस्थाको जाँच पछि तपाईंको डाक्टरले डाक्टरमा निर्भर गर्दछ। तथापि, 100mg, 200mg, 500mg, र 1000m बाट मानक डाइरेसन दायराहरू तर याद गर्नुहोस् केवल सहि खुराकले इच्छित परिणामहरू प्रदान गर्दछ। खुराक तपाइँको डाक्टर द्वारा विभाजित गर्नुपर्दछ, साप्ताहिक आधारमा वा दैनिक मेडिकल जाँच पछि। केहि व्यक्तिहरूलाई थोरै मात्र खुराकको आवश्यक पर्दछ, जबकि अरू बढाइएको खुराक पर्याप्त हुन्छ। तपाईको डाक्टरको सल्लाह बिना ड्रग किन्नुहुन्न किनकि यसले गम्भीर टेस्टोस्टेरोन एसीटेट साइड इफेक्ट निम्त्याउन सक्छ। यदि तपाईं एक खेलाडी हुनुहुन्छ भने तपाईं टेस्टोस्टेरोन एसीटेट शरीर सौष्ठवको लागि जान सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई तपाईंको मांसपेशीहरू र शरीरको द्रव्यमान घनत्व वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ।
टेस्टोस्टेरोन एसीटेट शरीर निर्माण
CAS NO को साथ: 1045-69-8, टेस्टोस्टेरोन एसीटेट बजारमा सब भन्दा द्रुत अभिनय स्टेरोइड मध्ये एक हो जसले धेरै पेशेवर बॉडीबिल्डर्सको हृदय जितेको छ। औषधि तपाईंको खुराक लिने बित्तिकै काम गर्न थाल्छ। यसले तपाईंको शरीरमा अधिक टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको उत्पादनलाई ट्रिगर गर्दछ जसले तपाईंको शरीरको मांसपेशीहरू र बर्षे फ्याटहरू सहित बिभिन्न तन्तुहरूलाई बढ्न मद्दत गर्दछ। एक बडी बिल्डरको रूपमा, तपाईलाई व्यायाम र उचित आहारको साथ डोजको साथ आवाश्यक हुन्छ, तपाईले इच्छित परिणामहरूको अनुभव लिनका लागि। औषधि दुबै मौखिक र इंजेक्शन योग्य फार्महरूमा अवस्थित छ। त्यसकारण कुन फाराम तपाईका लागि सब भन्दा राम्रो हो निर्णय गर्न यो तपाईमा भर पर्दछ। यद्यपि तपाईको चिकित्सक मेडिकल जाँच पछि सही निर्णय लिन सहयोग पुर्‍याउन सबै भन्दा राम्रो व्यक्ति हुनेछ।
टेस्टोस्टेरोन एसीटेट आधा जीवन र चक्र
तीव्रतम अभिनय औषधिहरू बीचको टेस्टोस्टेरोन एसीटेटको2को3दिन र 12 हप्ता भन्दा बढी अधिक उपचारको चक्र छ। डाक्टर तपाईंको स्वास्थ्यको स्थिति र आवश्यकताहरूको आधारमा उत्तम खुराक र टेस्टोस्टेरोन एसीटेट चक्रको साथ आउँदछ। त्यहाँ दैनिक र साप्ताहिक खुट्टा पनि एक विकल्प छ, आफ्नो चिकित्सकलाई के तपाईं सहज हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, र / उहाँले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ। तपाईं पनि अन्य प्रोसेसर जस्तै साइड इफेक्ट को प्रभाव को कम गर्न को लागी अन्य मौकों संग मिलन को उपयोग गर्न सक्छन्।
टेस्टोस्टेरोन एसीटेट लाभ
केहि मुख्य टेस्टोस्टेरोन एसीटेट फाइदाहरू त्यो हुन्;
यसले मांसपेशी विकास बढाउँछ
मांसपेशिहरु र समग्र ऊतक रिकवरी को सुधार गर्दछ
समग्र शरीरको प्रदर्शनलाई सुधार गर्नुहोस्
2. टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट
यो एक स्व-इंजेक्शन औषधि हो कि तपाइँ तपाइँको मांसपेशिहरुमा इंजेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँको डाक्टरले यो कसरी गर्ने भनेर देखाए पछि। टेस्टोस्टेरोन साइपियनेट बिक्रीको लागि डेपो-टेस्टोस्टेरोन ब्रान्डको नाममा आउँछ, र तपाईं यसलाई विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्महरूमा वा तपाईंको मेडिकल स्टोरबाट फेला पार्न सक्नुहुनेछ। धेरै जसो मामिलामा, औषधि यसको शक्ति र साइड इफेक्टका कारण सरकारले नियन्त्रण गर्छ यदि राम्रोसँग प्रयोग नगिएमा यो हुन सक्छ।
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट जसको सीएएस नम्बर 58-20-8 छ, यो 1940 हरूमा विकसित भएको थियो तर यो 1951 मा मेडिकल प्रयोगको लागि पेश गरिएको थियो। मेडिकल प्रयोगको अलावा, औषधि एथलीट र बडिबिल्डरहरूको लागि ठूलो पूरकको रूपमा कार्य गर्दछ। यसले शरीरमा टेस्टोस्टेरोन हार्मोनको उत्पादनलाई उत्प्रेरित गर्छ जसले सुधार गर्न र मांसपेशी विकास बढाउन आवश्यक छ साथै शरीरलाई अझ बल प्रदान गर्दछ। तपाइँका आवश्यकताहरूमा निर्भर गर्दछ, कम से कम प्रत्येक 1 मा4हप्ता सम्म इंजेक्शनको लागि बनाइन्छ। यो सल्लाह दिईएको छ कि तपाईं चिकित्सा परीक्षाको लागि जानुहुन्छ तपाईंको स्थिति वा आवश्यकताको लागि सही खुसी जान्न।
टेस्टोस्टेरोन Cypionate कार्यको तन्त्र
टेस्टोस्टेरोन साइप्रयन परिणामहरू सबै अन्य ड्रगहरू जस्तै छन् जुन एन्ड्रोजनको वर्गसँग सम्बन्धित छ। यस औषधि समूहमा स्टेरोइडहरूले समान तरिकाले कार्य गर्दछ र उही सर्तहरूको उपचार गर्दछ। टेस्टोस्टेरोन साइपियनेट पुरुषहरूमा हाइपोगोनैडिजमको उपचारको लागि आदर्श हो किनकि यसले टेस्टोस्टेरोन बदल्छ जुन तपाईंको शरीर उत्पादन गर्ने स्थितिमा छैन। तपाईंको चिकित्सकले सजिलै टेस्टोस्टेरोन साइपियनेट ईन्जेक्शन तपाईको अवस्था जाँच गरेपछि लेख्न सक्दछ। केही सामान्य साइड इफेक्टहरू जुन तपाईंले यो औषधि प्रयोग गरे पछि अनुभव गर्नुहुनेछ पीडा वा सुई इंजेक्शन क्षेत्र वरिपरि सूजन, लामो समयसम्म निर्माण, र अन्य बीचमा टाउको दुखाइ।
यो टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट मूल्यहरू एक विक्रेताबाट अर्को भिन्नता, यसैले तपाईंको अनुसन्धान गर्नु पहिले एक प्रतिष्ठित र विश्वसनीय विक्रेता प्राप्त गर्न को लागी उचित मूल्य मा ड्रग्स खुराक पेश गर्न सक्छ। तपाईंको चिकित्सकले तपाईंलाई सस्ती मूल्यमा सही टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोटेक खुल्दो मद्दत गर्न मद्दत पुर्याउन आवश्यक भूमिका खेल्न सक्छ। थप दबाइको खुट्टा लिने गम्भीर साइड इफेक्टहरूको नेतृत्व गर्न सक्छ, यसकारण सधैँ निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ आफ्नो डाक्टरको सल्लाह पछ्याउनुहुन्छ।
टेस्टोस्टेरोन Cypionate औषधिको खुराक
यो 200 को 800mgs प्रति हप्ता सिफारिस गरिएको सिफारिश टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोटेक खुराक संग एक इंजेक्शन योग्य ड्रग हो। तपाईंको डाक्टरले तपाइँको चक्र स्तरको आधारमा र कुन चक्रको अन्त्यमा तपाईं प्राप्त गर्न चाहानु भएको दाहिने खुराकको वर्णन गर्नेछ। इंजेक्शन तपाईंको माथिल्लो बाहिरी मांसपेशी वा तपाईंको बटुवाहरूद्वारा प्रशासित हुनुपर्छ। तपाईंको डाक्टरले साप्ताहिक वा द्विभाषी प्रस्ताव गर्न सक्छ, वा तपाइँ मासिक खुट्टाको लागि पनि जान सक्नुहुन्छ।
टेस्टोस्टेरोन Cypionate आधा जीवन
टेस्टोस्टेरोन साइपियनेट स्टेरोइडको life दिन सम्मको सक्रिय जीवन छ र पेशेवर बडिबिल्डर्स द्वारा प्रयोग गरिएको लोकप्रिय पूरक मध्ये एक हो। टेस्टोस्टेरोन साइपियनेट ईन्जेक्शन राम्रो परिणामको लागि days दिनको अन्तरालमा लिनुपर्दछ।
टेस्टोस्टेरोन Cypionate शरीर निर्माण
औषधि आगामी र अनुभवी बोसोल्डर र एथलीटहरूको लागि एक उत्कृष्ट पूरक हो। टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोटेट तपाईंको शरीरलाई कसरतको लागि पर्याप्त ऊर्जा प्रदान गर्दछ जसले तपाईंलाई आवश्यक मांसपेशी र शरीरको मासु प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। यो औषधिको प्रारम्भिक प्रयोगकर्ताहरू प्राप्त भएको परिणामहरू हेर्दै, तपाइँ निश्चित हुन सक्नुहुनेछ यो यो एक ड्रग हो जसले तपाईंको शरीर निर्माण गर्ने क्यारियरमा एक्सेल प्रदान गर्दछ। यद्यपि, तपाइँका लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि, तपाइँसँग उचित आहार र workouts सँग लागू औषधिको साथ हुनुपर्छ।
टेस्टोस्टेरोन Cypionate लाभ
यो स्टेरॉयड जस्तो धेरै पेशेवर बडिल्डरहरू किनकि यो गुणवत्ता परिणामहरू प्रदान गर्दछ र धेरै लामो समयको लागि। तपाईं मासिक खुसीको लागि विशेष गरी यदि तपाईं साप्ताहिक इंजेक्शन संग सहज छैन भने छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। अन्य टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट फाइदाहरू समावेश;
दुबई मांसपेशियों को बनाए राखन मा मदद
मांसपेशियों को विकास को सुविधा
दीर्घकालीन शरीर निर्माणको प्रस्ताव प्रस्ताव गर्नुहोस्
शरीरको शक्ति र ऊर्जा बढाउनुहोस्।
3. टेस्टोस्टेरोन डिकोनोनेट
यदि तपाईं एक पूरक खोज्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईंलाई आफ्नो मांसपेशिहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ, तपाईंलाई ऊर्जा दिनका साथै शरीरको बोसोहरू जलाउनमा टेस्टोस्टेरोन डिकोनोएट तपाईंको लागि सही उत्पाद हो। जहाँसम्म, तपाईंले बुझ्नु पर्छ कि टेस्टोस्टेरोन बिभिन्न रूपहरूमा आउँदछ र तपाईंले छान्नु भएको प्रकारले तपाईंको लक्ष्यहरूमा तपाईंको समग्र सफलतामा महत्त्वपूर्ण असर पार्न सक्छ। धेरै शरीर सौष्ठवहरु प्रयोग गर्छन् TESTOSTERONE डिस्काउंट स्टेरिओड्स शरीरमा एन्ड्रोजन रिसेप्टर ट्रिगर गर्न। दबाइले विभिन्न लाभहरू प्रस्तुत गर्दछ जस्तै कि erectile dysfunction with men for sexual drive in improvement। मांसपेशियों को विकास र स्थिरता को लागी, यदि तपाईं सही खुराक र आहार को पालन गर्छन भने यो दबाइ जादू गर्दछ।
टेस्टोस्टेरोन डेकोनोनले यसको लोकप्रियता प्राप्त गर्यो किनभने सकारात्मक नतिजाहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रदान गर्दछ। सुरुमा, औषधि पुरुषहरूमा निम्न टेस्टोस्टेरोन समस्याहरूको समाधानको लागि प्रयोग गरिएको थियो, यसले पहिले नै बुझ्यो कि यसले शरीरको बिरुवाहरू आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ। तथ्य यह है कि ड्रग्स खुराक प्रति सप्ताह एक पल्ट इंजेक्शन गरिन सक्छ यो धेरै पेशेवर निकायहरु को लागि पसंदीदा हो कि मौखिक खुराक स्टेरॉयड जस्तै नहीं। टेस्टोस्टेरोन डेकोनोट पनि उत्कृष्ट औषध हो जुन शरीरमा रातो रगत कक्ष उत्पादन बढाउन मद्दत गर्दछ। यस औषधको परिचय पछि धेरै वर्षसम्म यो पुरुष र महिला दुवैमा धेरै कम टेस्टोस्टेरोन प्रभावको लागि राम्रो समाधान साबित भएको छ।
Wटोप टोस्टरोस्टेरोन विकृया छ?
Decanoate एक एस्टर छ, र लेख मा पहिले परिभाषित को रूप मा, एस्टर एक जैविक यौगिक हो जो कुनै पनि तत्व को pharmacokinetics संग मदद गर्दछ। साधारणतया, यसले तपाईंको शरीर मार्फत औषधी लिन मद्दत पुर्याउँछ र यसले तपाईंको शरीरसँग कस्तो प्रतिक्रिया देखाएको छ। एस्टरले कुनै पनि ड्रगको आधा जीवन निर्धारण गर्छ र तपाईंको शरीरको प्रणालीमा कति लामो रहनेछ। टेस्टोस्टेरोन डिकोनोन बडी बिल्डिंग days दिनको आधा जीवन हुन्छ, यसको मतलब तपाईंले हप्तामा एक पटक ड्रग ईन्जेक्सन गर्नुपर्नेछ। यसको मतलब टेस्टोस्टेरोन डिकोनेट यस्तै डेक पुरुषहरूको लागि उत्कृष्ट औषधि हो जो दुबला मांसपेशीहरू कायम राख्न कठिनाईहरू छन्।
टेस्टोस्टेरोन डिकोनोनेट एचalf जीवन
तपाईंको खुट्टा लिने क्रममा7देखि 10 दिनका लागी औषधी तपाईंको शरीरमा सक्रिय रहन्छ। यसकारण, तपाईंले कम्तिमा एक पटक हप्तामा एक पटक लिनु पर्छ। राम्रो परिणामका लागि डाक्टरको निर्देशनहरू पछ्याउनुहोस् र तपाईंको लक्ष्यहरू सजिलैसँग प्राप्त गर्नुहोस्।
Testosterone Decanoate औषधिको खुराक
बडीबिल्डिंग उद्देश्यको लागि सिफारिस गरिएको टेस्टोस्टेरोन डिकोनाएट डोज २m० मिलीग्रामबाट प्रति हप्ता १०००mgs। शुरुआतीहरूलाई प्रति हप्ता २-250-1000-250०० ग्राम लिनु ठीक हुन्छ तर अर्को चक्रमा खुराक बढाउन सकिन्छ। सही आहार र कसरत अधिकतम परिणाम र लाभहरू प्राप्त गर्नका लागि उपयुक्त हुनेछ।
टेस्टोस्टेरोन डिकोनोनेट लाभ
मुख्य टेस्टोस्टेरोन डिकोनाएट फाइदाहरू जुन तपाईं यो औषधि सही तरिकाले प्रयोग गरेर आनन्द लिनुहुनेछ;
मांसपेशियों को विकास को सुविधा मा बेहद योगदान
दुबई मांसपेशिहरु लाई सुधार र बनाए राखन
समग्र शरीरको ऊर्जा वा शक्ति बढाउनुहोस्।
अर्कोतर्फ, टेस्टोस्टेरोन डिकोनाएट बनाम साइपियानेटले उस्तै काम गरी समान परिणाम दिन सक्छ, तर भिन्नता आधा जीवनमा आउँछ। टेस्टोस्टेरोन डेकानोटेटमा, तपाईले प्रति हप्ता केवल एक खुराक इन्जेक्सन गर्न आवश्यक छ, जबकि साइपियनेटमा तपाईले कम्तिमा पनि दुई वा तीन दिनमा एक पटक इन्जेक्सन गर्नुपर्नेछ। यस औषधिको साथ महत्त्वपूर्ण साइड इफेक्ट यो हो कि यसले तपाईंको शरीरमा टेस्टोस्टेरोनको प्राकृतिक उत्पादनलाई दबाउन सक्छ जसको मतलब तपाईंको शरीर औषधि चक्र पूरा गरेपछि आवश्यक मांसपेशीहरू निर्माण गर्न असक्षम हुनेछ। तपाईंको शरीरको शक्तिमा निर्भर गर्दै, तपाईं बिभिन्न साइड इफेक्टहरूको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ जुन कहिलेकाँही गम्भीर हुन सक्छ यदि तपाईंले सही खुराक प्रयोग गर्नुहुन्न भने। उदाहरण को लागी तपाई असामान्य पसीना, अनिद्रा वा एक्ने अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। जहिले पनि तपाइँको डाक्टरका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् र कुनै प्रतिकूल प्रभावको मामलामा उसलाई सूचित गर्नुहोस्।
4. टेस्टोस्टेरोन एनाथेट
यो एक इन्जेक्शन औषधि हो जुन निम्न टेस्टोस्टेरोनको कारणले गर्दा उपचारको लागि आदर्श हो जुन यस्तो मांसपेशिहरु, नपुगेको वा विलम्ब र ज्योति र अन्य हार्मोन असंतुलन निर्माण गर्न असमर्थ हुन सक्छ। एक डाक्टरले टेस्टोस्टेरोन एनाथेट को डेट गर्नु पर्छ किनभने यसको दुरुपयोग अपरिवर्तनीय प्रभाव हुन सक्छ।
1930s मा बजार को रिलीज पछि टेस्टोस्टेरोन एनाथेट को सबै भन्दा ज्ञात शक्तिशाली एनाबिक स्टेरियोड्स मध्ये एक छ। आज सम्म, धेरै पेशेवर बडिबिल्डर र एथलीटहरु द्वारा ड्रग को सबै भन्दा पसंदीदा स्टेरॉइड मा रहछन। पहिलोमा, स्टेरॉइड कुनै पनि एस्टरलाई जोडिएको थिएन जुन यसले रक्तचापमा अवशोषित औषधि बनायो। 1937 मा, निर्माताले एस्टेर रसायनको साथ औषधिलाई संयोजन गर्न थाले जुन यस स्ट्रिइडमा लगभग सबै कुरा परिवर्तन भयो। वर्ष 1950 मा, दबाइ निर्माताले यसलाई औषधिमा एन्टिन्थेट एस्टर कम्पाउन्डमा समावेश गर्ने निर्णय गरे जसले यो शक्ति प्रदान गर्दछ जुन आजका धेरै बडिबुडीहरू आनन्दित छन्।
टेस्टोस्टेरोन ईन्थेट २ 250० विशिष्ट औषधि प्याकेजि is हो जुन तपाईं बजारमा फेला पार्नुहुनेछ। यद्यपि तपाईको अवस्था जाँच गरेपछि तपाईको डाक्टरले डोजलाई अनुकूलन गर्न सक्दछ। खेलाडीहरूको लागि, यो ईन्जेक्टेबल औषधिले तपाईंलाई तपाईंको प्रदर्शन सुधार गर्न मद्दत गर्दैन, तर यसले तपाईंलाई तपाईंको इच्छित परिणामहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। टेस्टोस्टेरोन एन्थथेट बिजुली बनाउने तपाईंको मांसपेशिहरु ट्रिगर गर्न र तपाईंको शरीर मा वसा को विनियमित गर्न मा मदद गर्दछ। तपाईं आफ्नो नियमित फिटनेस व्यायाम जारी राख्दा, तपाईं मांसपेशी र तपाईलाई चाहनु भएको शरीरको आकार प्राप्त गर्नुहुनेछ। यदि तपाईं नतिजा नतिजा नपाउँदा असफल भएमा, मद्दतको लागि तपाईंको डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
टेस्टोस्टेरोन इन्फेनेट बिक्री को लागी विभिन्न फार्मेसीहरु, र अनलाइन स्टोरहरु मा उपलब्ध छ, यद्यपि तपाईको स्वास्थ्य पेशेवर सल्लाह अनुसार औषधि किन्नुहोस्। ड्रग प्रभाव हानिकारक हो यदि तपाईं अधिक मात्रामा प्रयोग गर्नुभयो वा यसको दुरुपयोग गर्नुभयो र कहिल्यै उल्टाउन मिल्दैन। सुरक्षित पक्षमा हुनको लागि तपाईंको डाक्टरले तपाईंको लागि सही डोज लेख्न दिनुहोस्। टेस्टोस्टेरोन इन्न्थेट चक्र पछि तपाईले परिणामहरू देख्न सक्षम हुनुपर्दछ, र यदि तपाईले केही देख्नु भएन भने, आफ्नो डाक्टरलाई सूचित गर्नुहोस्।
टेस्टोस्टेरोन Enanthate औषधिको खुराक
धेरै चिकित्सकहरु व्यक्तिविज्ञानी टेस्टोस्टेरोन इन्न्थेट खुराक लाई प्राथमिकता दिन्छन् यद्यपि औषधि बिभिन्न मात्रामा आउँदछ। उदाहरण को लागी, ड्रग डोजहरु तपाईले प्राप्त गर्न चाहानु हुने लक्ष्यहरु अनुसार वितरण गरीन्छ यदि तपाईं एक बॉडी बिल्डर हुनुहुन्छ भने - यो औषधिको लागि मानक खुराक प्रति दिन २m०mg देखि 250०mgs प्रति हप्ता सम्म हुन्छ। केहि अवस्थाहरूमा, बॉडीबिल्डरहरूले हप्तामा १०००mgs सम्मको उच्च खुराक लिन्छन्। खुराक तपाईंको चक्र स्तर द्वारा निर्धारित गर्न सकिन्छ, शुरुआतीहरूलाई कम खुराकहरू सिफारिस गरिन्छ जुन पछि बढाउन सकिन्छ।
टेस्टोस्टेरोन एनाथेट एचalf जीवन
टेस्टोस्टेरोन एनाथेटले 10.5 दिनहरूको सक्रिय आधा-जीवन छ, र तपाइँले 10 दिन पछि आफ्नो खुट्टाको लागि इंजेक्शन पाउनुपर्दछ। तथापि, तपाईंको डाक्टरले सही साप्ताहिक खुट्टा डिजाइन गर्न सक्छ जसले तपाईंलाई बलियो बनाउन र मांसपेशिहरु निर्माण गर्न सक्षम पार्छ।
टेस्टोस्टेरोन Enanthate चक्र
टेस्टोस्टेरोन इन्फेनेटमा तपाईको स्तरमा निर्भर गर्दै विभिन्न चक्रहरू हुन्छन्, र तपाईको डाक्टर तपाईका लागि उत्तम उत्तम डिजाइन गर्न उत्तम स्थितिमा हुनेछन्। उदाहरण को लागी, शुरुवात टेस्टोस्टेरोन enanthet चक्र साना खुराक र अन्य मौखिकहरू जस्तै Arimidex र Deca-Durabolin को उपयोग समावेश गर्दछ। एक अग्रिम चक्र जुन दोस्रो चक्र हो, तपाईको शरीर सुरुवाती खुराकको लागि प्रयोग गरेपछि खुराक बढाइन्छ। यहाँ औषधी सम्पूर्ण चक्र को लागी Dianabol 40mgs प्रति दिन संगै प्रयोग गरीन्छ। हार्डकोर चक्र शीर्ष स्तर हो जुन अनुभवी टेस्टोस्टेरोन इन्न्थेट प्रयोगकर्ताहरूको लागि आदर्श हो, र यहाँ डोज ज्यादै उच्च छ।
टेस्टोस्टेरोन एनाथेट फायदाहरू
यो औषधि बॉडीबिल्डर्स र एथलीटहरूको क्यारियर बृद्धि गर्न एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने साबित भएको छ। जब सही तरिकाले लिईन्छ औषधिले विभिन्न प्रभावहरू पुर्‍याउन सक्छ, टेस्टोस्टेरोन इन्फेनेट लाभहरू समावेश गर्दछ;
बढि र मांसपेशिहरु को विकास मा सुधार
दुर्घटना पछि रिकवरी वा कामआउटको समयमा खिचिएको ऊतक सुधार गर्नुहोस्।
एथलीट र बडिबिल्डरहरूले सहयोग पुर्याउन समग्र शरीरको शक्ति र ऊर्जालाई बढाउनुहोस्।
उनीहरुको शरीरको आकार प्राप्त गर्न शरीरको बोसो जलाउनुहोस्।
टेस्टोस्टेरोन phenylpropionate (बान) (मार्क नाम टेस्टोलेन्ट), वा टेस्टोस्टेरोन फेनाइल्रोपिओनेट, अन्यथा टोस्टरोस्टेरोन हाइड्रोसिनमेट भनिन्छ, इन्जिनियरिङ एनाबलिक-एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड (AASraw) र एन्ड्रोजन एस्टर - स्पष्ट रूपमा, टेस्टोस्टेरोनको C17β फेनिलप्रोपायोनेट एस्टर - जुन एक पटक रोमानियामा बढुवा गरिएको थियो। यो सर्वप्रथम १ 1955 XNUMX मा वैज्ञानिक लेखोटहरुमा शुरू भएको थियो र केहि बिभिन्न एएएस व्यापार आइटमको एक तत्व थियो, यद्यपि व्यापक रूपमा कहिले प्रयोग गरिएको थिएन। टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपायोनेट पनि यस्तै हड्तालको रूपमा सुस्टानन र ओम्नाड्रेनको अंश थियो।
टेस्टोस्टेरोन फेनाइल्रोपिओनेट पहिलो पटक 1955 मा साइइकमेड फार्मासिटिकल हाउस मा रिलीज भएको थियो तर यो नाम ब्रान्ड टेस्टोलेन्ट को तहत बेचेको थियो। यसलाई रिलीज गरे पछि कालो बजार पनि उपलब्ध छैन। तथापि, हालको सातामा यो उपलब्ध छ र शरीर बङ्गलादेश र एथलीटहरु द्वारा सकारात्मक प्राप्त भएको छ। औषधि ओमेनेड्रेन जस्तै अन्य टेस्टोस्टेरोन मिश्रणहरूको भाग भएको छ।
टेस्टोस्टेरोन फेनाइल्रोपियोनेनेट औषधिको एन्ड्रोजन समूहमा राखिएको औषधि हो। टेस्टोस्टेरोन फेनाइल्रोपियोनेनेट एक औषधि हो जुन इंजेक्शन को माध्यम ले प्रशासित हुनु पर्छ। इंजेक्शन पछि, औषधि लगभग5दिनको लागी सक्रिय रहन्छ जब तपाई अर्को खुसी लिन सक्नुहुनेछ। दबाइले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ वा अन्य टेस्टोस्टेरोन एस्टेरर्ससँग टेस्टोस्टेरोन उपचारको लागि पुष्टी टेस्टोस्टेरोन अपर्याप्त संग रोगीमा प्रयोग गर्दछ। अर्कोतर्फ, यो लोकप्रिय ड्रग प्रयोग शरीर शरीर मासु र मांसपेशियों को बल को सुधार को लागि आदर्श छ।
एक सकारात्मक ट्रेडमार्क जुन प्रयोगकर्ताहरूले यो चीजको बारेमा सोच्नु पर्छ कि त्यो त्यस्तो पानी मर्मत समय-समयमा मात्र देखिन्छ। थप रूपमा, टेस्टोस्टेरोन फेनिलप्रोपिओनेट लिएर, शरीर सौष्ठवकर्ताहरूले तृष्णा, बलपूर्वक, र गुणस्तर वृद्धि रिपोर्ट गर्दछ। सबैमा टेस्टोस्टेरोनको यस प्रकारको सहि उपयोग गरेर प्रभावहरू अन्य टेस्टोस्टेरोन एस्टरहरू जस्तै छन् यद्यपि यसलाई अत्यन्तै भ्रमण गर्ने इन्फ्युसनहरू आवश्यक पर्दैन, वा पानी मर्मतका कारण पर्दैन।
टेस्टोस्टेरोन phenylpropionate फायदाहरू
यो टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयडले शरीरमा उत्कृष्ट असरको कारण शरीरको बिरुवाको बीचमा लोकप्रियता पाएको छ। केहि ज्ञात टेस्टोस्टेरोन phenylpropionate फायदे समावेश;
नाइट्रोजन अवधारण क्षमता सुधार गरेर मांसपेशिहरु को निर्माण बढाव।
समग्र शरीर को ऊर्जा को बढावा दि्छ, यसैले एथलीटहरुलाई लामो समय सम्म काम गर्न को लागी सक्षम वा इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न को लागी सक्षम गर्दछ। यसले एक बिजुली बिल्डर र एथलीटको समग्र प्रदर्शनलाई पनि सुधार गर्दछ।
शरीरमा रातो रक्त कोशिका उत्पादनको उत्तेजना।
शरीर बोसो घटाउनुहोस् र जलाउनुहोस्।
टेस्टोस्टेरोन फेनाइल्रोपियोनेटेट एचalf जीवन
टेस्टोस्टेरोन फेनाइल्रोपिओनेट3को4सम्म4दिनको आधे-जीवनको साथ इंजेक्शन औषधि हो। तपाईंलाई XNUMX दिनमा एकपटक तपाइँको खुट्टा लिनु आवश्यक छ। एक पेशेवर स्वास्थ्य चिकित्सक को इंजेक्शन को प्रबंधन गर्नु पर्छ।
टेस्टोस्टेरोन फेनाइल्रोपियोनेटेट खुराक
धेरै एथलीटहरू वा शरीरशास्त्रीहरूले हरेक औषधी हप्तामा वा दुई पटक पछि यो औषधि प्रयोग गर्छन्। सही टेस्टोस्टेरोन फेनाइल्रोपियोनेट खुराक 300Gm बाट 3000mg प्रति हप्तासम्म। तथापि, टेस्टोस्टेरोन फेनाइल्रोपिओनेट साइड इफेक्ट अन्य स्टेरियोड्स को तुलना मा कम गम्भीर छ।
टेस्टोस्टेरोन Phenylpropionate चक्र
टेस्टोस्टेरोन फेनाइल्रोपियोनेटेट स्टेरॉइडले अन्य छोटो एस्टेरर्सको साथ एक 10-हप्ता चक्र भन्दा कमको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक उत्कृष्ट टेस्टोस्टेरोन फेनाइल्रोपियोनेनेट चक्रमा परीक्षण प्रोभ चक्र समावेश भएको छ जसमा प्रति सप्ताह 300mg को एक खुट्टा र 300mg प्रति हप्ता पनि एक अनुशंसित खुट्टा संग क्लासिक एनपीपी हुन्छ। छोटो चक्रलाई 10 हप्ताभित्र बडिबिल्डरहरूको लागि हुनुपर्छ।
6. टेस्टोस्टेरोन आइकोप्रोट
Isocaproate एस्टर एक एनाबोलिक स्टेरोइडसँग जोडिएको छ। यो एक एस्टर हो जुन स्टेरोइडसँग उस्तै प्रसिद्ध जडान हुन सक्छ प्रसिद्ध Cypionate वा जस्तै Enanthate एस्टरहरू। साइपियनेट र एनान्याटे जस्तो, आइसोकाप्रोएट पनि टेस्टोस्टेरोन हर्मोनमा जोड्न सकिन्छ, यद्यपि आइसोकाप्रोएटको आधारमा यो सामान्यतया प्राथमिक स्थान हो जुन हामीले यसमा समावेश भएको देख्यौं। टेस्टोस्टेरोन-इसोकाप्रोएट, एक मोनोस्टर आकार जुन सुन्न नसक्ने; मौकामा तपाइँले यसलाई पत्ता लगाउनु भयो भने, यो प्रख्यात दाबीभन्दा पनि बढी सम्भावित दाबी हो, र कुनै एकल एस्टरको रूपमा टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट कहिल्यै आवाश्यक हुँदैन। जहाँ हामी isocaproate एस्टर धेरै सामान्य प्राप्त गर्नेछौं र जहाँ यो एक उच्च उद्देश्य टेस्टोस्टेरोन मिश्रणमा छ; स्पष्ट रूपमा ओम्नाड्रेन र Sustanon २ .०। Omnadren र Sustanon-250 संलग्न चार अनुमानहरूसँग टेस्टोस्टेरोन यौगिक दुवै छन्; विभिन्न आकारहरूको चार अनुमानहरू जुन एक समग्र टेस्टोस्टेरोन कम्पाउन्ड बनाउँछ।
टेस्टोस्टेरोन Isocaproate एक एस्टर छ, र यो केवल Omnadren र Sustanon 250 जस्तै स्टेरियोड्स संग संलग्न हुँदा उपलब्ध छ। यस एस्टरको इतिहास 1970s बाट पत्ता लगाउन सकिन्छ जब सस्टनान्ट एक्सएनमक्स बजारमा रिहा गरियो। Isocaproate ester को भूमिका को लागी औषधि लाई तपाईंको शरीर मा लामो समय सम्म सक्षम गर्न को लागी सक्षम छ र अन्य स्टेरॉयड यौगिहरु को प्रभावी ढंग देखि काम गर्न को लागी अनुमति छ। Isocaproate एस्टेर स्टेरियोड्सले 250-7 दिनबाट आधा जीवन प्रदान गर्दछ।
टेस्टोस्टेरोन आइकोप्रोट औषधिको खुराक
यो आइसोक्रोट स्वतन्त्र रूपमा अवस्थित छैन किनकी, यो कहाँ समावेश गरिएको आधारमा टेस्टोस्टेरोन आइसोस्पाटेट खुल्ला भिन्न हुन्छ। उदाहरणका लागि, Sustanon 250 मा यो खाने को समावेश 60mgs र Sustanon 250 को खुट्टा 250mgs देखि 1500mgms सम्म प्रति हप्ता हुन्छ। तपाईंको डाक्टरले तपाइँका आवश्यकताहरूको आधारमा तपाईंको लागि उत्तम खुराकको वर्णन गर्नेछ।
टेस्टोस्टेरोन आइकोप्रोट आधा जीवन
टेस्टोस्टेरोन आइसोकैपेटमा 7-9 दिनको सक्रिय आधे-जीवन छ जसको अर्थ यो एस्सारसँग जोडिएको कुनै स्टेरॉइडको खुट्टा प्रति हप्तामा लिनु पर्छ। यदि तपाईं आज आफ्नो चक्र पूरा गर्नुहुन्छ भने, तपाईं अर्को दिनको लागि लागू औषधिको आनन्द उठाउनुहुनेछ।
टेस्टोस्टेरोन Isocaproate Benefits
टेस्टोस्टेरोन आइसोकाप्रोएट बेफाइदा ओम्नाड्रेन र सुस्तानन २ 250० जस्तो मिश्रणमा आधारित हुन सक्छ र दुई सारांश अप वर्गमा छुट्याउन सकिन्छ; माथिको एट्रिब्यूटहरू द्वारा प्राप्त शक्तिहरू र यस प्रकारको कम्पाउन्डले एकल एस्टर आकारको विपरितमा दिन्छ। प्रारम्भिक चरणमा जाँच गरिए अनुसार, टेस्टोस्टेरोन मिश्रणको शक्ति दुई ब्रह्माण्डलाई थोरै र जबरदस्त एस्टर अर्थमा राम्रो प्रदान गर्नु हो, र यसले दुबै द्रुत अभिनय टेस्टोस्टेरोन दीर्घकालीन प्रभावहरू प्रदान गर्दछ। यो जस्तो लाग्न सक्छ कि यो अलि अलि धेरै साधारण छ, तर कुराको सत्यता यो भन्दा बढि अरु केहि छैन। त्यस बिन्दुमा, हामीसँग केही सुविधाहरू छन् जुन माथिको विशेषताहरूमा निर्भर छन्, र ओम्नाड्रेन र सुस्तानन २ 250० पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको लागि उपयोग गरिएको छ, हामी केवल त्यस प्रकाशमा हुने फाइदाहरूमा ध्यान दिन गइरहेका छौं।
अफ सीजन एथलीटका लागि, दुबै मात्रामा दुबै वस्तु र गुणस्तरको विशाल मात्रा प्राप्त गर्ने आशामा, आइसोकाप्रोएट आकारहरू एक आदर्श निर्णय हो किनकि ती दुई पक्षलाई एक साथ अघि बढाउँछन्। यसबाहेक, मेटाबोलिक वातावरण फैलाएर, तपाई फ्याट रेशो भन्दा कम मांसपेशीको साथ फिट मास लिन तयार हुनुहुन्छ, र त्यो अमूल्य छ। समान मिश्रणहरू काट्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ; सबै चीजहरूलाई विचार गरीन्छ, सुधारिएको पाचनले विस्तारित बोसो खपत गर्ने क्षमतालाई संकेत गर्दछ, र टेस्टोस्टेरोन ठूलो दुब्ला टिशू संरक्षकको रूपमा यो कुनै पनि काट्ने व्यवस्थाको लागि केवल एक शानदार निर्णय हो।
7. टेस्टोस्टेरोन propionate
यो सबैभन्दा छोटो टेस्टोस्टेरोन एस्टर हो जुन रक्तप्रवाहमा छिटो विघटन हुन्छ। तसर्थ, यदि तपाईंलाई द्रुत-अभिनय उत्पादनको आवश्यकता छ भने, त्यसपछि टेस्टोस्टेरोन प्रोपिओनेट तपाईंको लागि सही विकल्प हुनेछ। यद्यपि यो औषधि एक दिनको आधा जीवन मात्र हो। त्यसकारण तपाईंले चक्र समाप्त नभएसम्म प्रत्येक दिन औषधी इन्जेक्सन गर्नुपर्नेछ। टेस्टोस्टेरोन प्रोपियनेट मूल्य एक विक्रेताबाट अर्कोमा तपाइँको छनौट खुराकको दायरा हुन्छ। तुलना गर्दै टेस्टोस्टेरोन propionate vs cypionate, प्रभावकारी सम्बन्धमा तपाईं एक दिनचर्या काम गर्दछ किनभने तपाईं propionate चयन गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईं दैनिक आफ्नो दैनिक लिनु पर्छ।
अन्य स्टेरियोड्स जस्तै, टेस्टोस्टेरोन propionate प्रारम्भिक 1930s मा विकसित गरियो र यसले शरीर मा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्तर मा सुधार गर्न को लागि। औषधि अब्राहमहरु को बीच विश्वव्यापि रूपमा अब लोकप्रिय छ कि उनको लक्ष्यहरु लाई प्राप्त गर्न को लागी उनको सहयोग को लागि महत्वपूर्ण साबित गर्न को लागी। अब दशैंहरुका लागी औषधिको मागले फाइदा लिनका लागि फाइदा उठाइरहेको छ जसले प्रयोगकर्ताहरुलाई प्रस्तुत गर्दछ जसले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फाइदाहरू जस्ता सुधार गर्दछ। पुरुष विशेषताहरू जुन यस हार्मोन प्रदान गर्दछ उच्च मांगको अर्को कारण हो।
टेस्टोस्टेरोन Propionate औषधिको खुराक
टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट चक्र शुरुवातकर्ताले तपाईंलाई सानो डोजबाट सुरू गर्ने माग गर्दछ जुन -50०-११०० mgs देखि २- days दिन पछि इंजेक्सन गर्न सकिन्छ। टेस्टोस्टेरोन प्रोपिओनेटको साप्ताहिक खुराक २०० देखि m००mgs सम्म।
औषधिले प्रारम्भकर्ताहरूका लागि गम्भीर साइड इफेक्टहरू पहिलो पटक परिणाम पुर्याउन सक्छ जुन पहिलो पटक अत्यधिक मात्रामा खुट्टा खुल्छ। तपाईंको डाक्टरले तपाईंको अवस्थाको जाँच पछि उचित खुवाई दिनुहुनेछ। तपाईंले प्रभाव पार्नुहुनेछ पहिले र पछि टेस्टोस्टेरोन propionate लिदै। खुल्ला निर्देशनहरू पालन गर्न सधैं सम्झनुहोस्। तथापि, यदि तपाईं दैनिक खुसीको साथ असहज हुनुहुन्छ भने, तपाईं इन्जेक्शन जुन एक महिनाको लागि जान सक्नुहुन्छ।
टेस्टोस्टेरोन Propionate आधा जीवन
टेस्टोस्टेरोन propionate गोलहरू 24 घण्टाको आधा-जीवन छ तर इंजेक्शन योग्य जेलसँग4हप्ता सम्म सक्रिय जीवन छ। तपाईंको डाक्टरले उत्तम खुट्टा अन्तरालहरू डिजाइन गर्नुहुनेछ जुन तपाईले चाहानु हुने परिणामहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ।
औषधि पछि 1930s मा बजार मा रिलीज गरे पछि। यो शरीरको बल सुधार र मांसपेशिहरु को निर्माण बढाने मा मदद गर्न को लागी प्रमाणित भयो। दबाइले तिनीहरूलाई बढाउने सक्षम पोषक तत्वहरू संग मांसपेशी प्रदान गर्दछ र प्रयोगकर्ताले उपयुक्त अभ्यास गर्दछ जब खेलमा आवश्यक शरीरमा सामूहिक मात्रा प्राप्त गर्न सकिन्छ। तपाईंको शरीरमा टेस्टोस्टेरोन हार्मोनको उपस्थिति भनेको तपाईं मांसपेशिहरु को निर्माण गर्न को लागी धेरै फायदाहरु जस्तै तपाईंको मानव विशेषताहरु को सुधार जस्तै आवाज को गहरा र धेरै अन्य को बीच अनुहार को बालों को विकास जस्तै हुनेछ।
तथापि, तपाईंको डाक्टर परामर्श टेस्टोस्टेरोन प्रोभेटेट परिणामको अनुभव गर्न सबैभन्दा सुरक्षित तरिका हुनेछ। इंजेक्शन क्षेत्रहरू वरिपरि सुँगुर वा सुँगुर सामान्य छ, तर यो केहि समय पछि गायब हुनु पर्दछ भने प्रभाव नपुगेको छ भने तुरुन्तै तपाइँको चिकित्सकलाई फर्कनुहोस्। अन्य बडिबिल्डरहरूसँग दुर्व्यवहार साझेदारी गर्दा जोखिम भइरहेको हुन सक्छ किनकि तपाइँ पक्का छैन कि तपाईंको औषधिले कस्तो असर पार्छ। मेडिकल परीक्षा तपाईंको टेस्टोस्टेरोन प्रोभेरेट खुराक अघि र पछि धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
टेस्टोस्टेरोन propionate लाभ
लाभ दुबला मांसपेशिहरु मा सहयोग गर्दछ
सेक्स ड्राइव बढाउनुहोस्
मांसपेशियों को वृद्धि को बढावा
पेट बोसो जलाउनुहोस्।
8. टेस्टोस्टेरोन Sustanon 250
Sustanon 250 स्टेरॉयड कम प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन र स्तरबाट पीडित पुरुषहरूको लागि एक ईन्जेक्सन औषधि हो र उनीहरूलाई धेरै लाभहरू अस्वीकार गर्दछ। Sustanon २० लाई प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो इच्छा बढाउन पुरुष गुणहरू विकास गर्न अनुमति दिन्छ जस्तै उनीहरूको आवाजलाई गाढा पार्ने, मांसपेशिहरूको सुदृढीकरण गर्न र शरीरमा वा अनुहारको क्षेत्रहरूमा कपालको बृद्धि समेत।
सुस्टानन २ 250० एक स्टेरोइड हो जुन १ 1970 s० को दशकमा ऑर्गन कम्पनीले पुरुषहरूलाई उनीहरूको शरीरले टेस्टोस्टेरोन हर्मोनहरू उत्पादन गर्न नसक्ने सहयोगको लागि विकसित गरेको हो। यो बजारमा जारी भएपछि यो औषधीले एकदम छोटो समयमा लोकप्रियता प्राप्त गर्‍यो किनकि यो धेरै एथलीटहरू र बॉडीबिल्डरहरूका लागि वास्तविक समाधान साबित भयो। सुस्टानन २ 250०4फरक टेस्टोस्टेरोन एस्टरको संयोजन गरेर बनेको छ जसमा ,०mg टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, m०mg-testosterone phenylpropionate, १००mg-testosterone decanoate, र m०mg-isocaproate छ। कम्पोजिसनले उत्पादलाई शक्तिशाली र दुबै निर्माणकर्ताहरू र अन्य कम टेस्टोस्टेरोन समस्याहरूका लागि उपयोगी बनाउँदछ।
कसरी Sustanon 250 इंजेक्शन
यो ड्रग इन्जेक्शन केवल हप्ता एक पटक वा3दिन पछि यसको शक्तिको कारण दिइन्छ जुन यसले केही दिनको लागि तपाईंको शरीरमा काम गर्न सक्षम गर्दछ। यद्यपि दुर्व्यवहार विश्व-डोपिंग एजेन्सीद्वारा रोकिएको छ, त्यसैले सक्रिय खेलाडीहरूको लागि उपयुक्त छैन। तपाईं आफ्नो मांसपेशिहरु मा दबाइ आफैलाई इन्जेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाइँको डाक्टरबाट इंजेक्शन प्राप्त गर्न क्लिनिकमा नियमित भ्रमणका लागि तालिकाबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। ड्रगको आधा जीवन धेरै लचीला छ यो धेरै प्रयोगकर्ताहरु को लागि आदर्श बनाउने तर साइड इफेक्टहरूबाट बच्नको लागि सधैँ खुसीहरू हेर्न।
बिजुली निर्माणको लागि सस्टन्यान्ट 250
मूलतया, तपाईंको शरीरमा पर्याप्त टेस्टोस्टेरोन हर्मोन बिना, यो बिजुली बिल्डरको रूपमा चाहिएको मांसपेशी जन प्राप्त गर्न गाह्रो हुनेछ। कुनै पनि आहार वा कसरत तपाईं दैनिक गर्नुहुन्छ, तपाईंसँग तपाईको प्रदर्शन बढाउन पुरुष पुरुषहरू हुनुपर्छ। दबाउले तपाईंको शरीरलाई अझ अस्ट्रोजन उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गरेर काम गर्छ, यस प्रकार एक प्रभावकारी टेस्टोस्टेरोन स्तर प्राप्त गर्दछ। Sustanon 250 निर्माण र लीन मांसपेशिहरु को बनाए राखन सहित कम टेस्टोस्टेरोन स्तर को कारण सबै समस्याओं को सुलझाने मा मदद गर्दछ।
टेस्टोस्टेरोन Sustanon 250 औषधिको खुराक
बडिबलिल्डरहरूको लागि दायाँ Sustanon 250 खुट्टामा प्रतिवेदन 250mgs -1500mgs प्रति हप्ताको हुनुपर्छ। यद्यपि, 500-750mg प्रति हप्ता भन्दा बढी इंजेक्शन योग्य खुराक हो। केहि मान्छे तीन दिन पछि Sustanon 250 इंजेक्शन संग असहज महसूस हुन सक्छ तर साप्ताहिक खुराक को लागि जा रहेको एक महान विचार हुनेछ।
Sustanon 250 लाभ के हो?
यस औषधि प्रयोग पछि तपाईले पाउनुहुनेछ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लाभ इंजेक्शन पछि तीन हप्ताको लागि निरन्तर टेस्टोस्टेरोन हुन्छ। तपाईंको मतलब अन्य टेस्टोस्टेरोन लाभहरु बीच आवश्यक शरीर को बल र उत्कृष्ट सेक्स ड्राइव हुनेछ। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं लामो समय सम्म लागू औषधि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले तपाइँको टेस्टोस्टेरोन तहको मोनिटर गर्न रगत खानुपर्छ। कम वा अतिरिक्त हार्मोन तहहरू खतरनाक हुन सक्छ। यो औषधि लिनबाट अर्को ठूलो लाभ तपाईले दुबई मांसपेशियों को बढावा र बनाए राखयो।
टेस्टोस्टेरोन Sustanon 250 चक्र
Sustanon 250 चक्रले अन्य मौखिकहरू समावेश गर्दछ किनभने तपाइँले दुबैले मांसपेशिहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न किनभने तपाईले मात्र Sustanon प्रयोग गरेर। यहाँ Sustanon बल्किंग चक्र हो;
हप्ताको Sustanon250 Dianabol Ostarine
Aromasin N2guard डेका डुराबोलिन
1 500mgs / हप्ता 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / हप्ता
2 500mgs / हप्ता 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / हप्ता
3 500mgs / हप्ता 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / हप्ता
4 500mgs / हप्ता 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / हप्ता
5 500mgs / हप्ता 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / हप्ता
6 500mgs / हप्ता 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / हप्ता
7 500mgs / हप्ता बन्द 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / हप्ता
8 500mgs / हप्ता बन्द 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / हप्ता
9 500mgs / हप्ता बन्द 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / हप्ता
10 500mgs / हप्ता बन्द 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / हप्ता
11 500mgs / हप्ता बन्द 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / हप्ता
* एड हरेक दिन / प्रति दिन मतलब छ
9। टेस्टोस्टेरोन Undecanoate
यो एक लामो-अभिनय औषधि हो जुन किप्सल वा इंजेक्शन फारममा आउँछ। छनौट तपाईंको सँधै छ, तर खुट्टाको दुई प्रकार प्रभावकारीताको बारेमा भिन्न हुन्छन्। दबाइ पुरुषहरु लाई कम टेस्टोस्टेरोन ले स्तर को लागी आदर्श छ या उनको शरीर अत्यधिक हार्मोन उत्पादन गर्न मा असमर्थ छ। टेस्टोस्टेरोन अज्ञात पुरुष पुरुष विशेषताहरु को विकास मा मदद गर्न सक्छन् जस्तै ध्वनि, वोसो वितरण र मांसपेशियों को निर्माण को गहन।
टेस्टोस्टेरोन अज्ञात १ 1980's० को दशकमा अर्गानन ड्रग कम्पनीले विकसित गरेको थियो जुन टेस्टोस्टेरोन औषधि प्रदान गर्ने उद्देश्य थियो जुन कलेजोमा सर्ने थिएन। साथै, औषधि एक एनाबोलिक एन्ड्रोजन स्टेरोइड सिर्जना गर्ने विचार थियो (AASraw) जुन पुरुषहरूमा कम टेस्टोस्टेरोन उत्पादनको उपचारमा मद्दत गर्न सक्दछ। यद्यपि, अन्य टेस्टोस्टेरोन एस्टरहरूको परिचय जसले परिणाम दिने सन्दर्भमा बलियो प्रमाणित गर्दै छ, टेस्टोस्टेरोन अण्डकोनोएट बिस्तारै धेरै व्यावसायिक बडिबिल्डर्स र एथलीटहरू बीच लोकप्रियता गुमाउँदैछ।
कसरी टेस्टोस्टेरोन अज्ञात हुन्छ काम गर्दछ
टेस्टोस्टेरोन अज्ञात लिम्फेट प्रणालीको माध्यम ले जान्छ र अन्य स्टेरॉयड जस्तै लिभर छैन। यसकारण, ड्रग बिना विनाशकारी वा खतरा बिना रक्तचापमा प्रवेश गर्दछ जसको मतलब तपाईंले पूर्ण प्रभावलाई प्रभाव पार्छ। स्ट्रिइडको प्रक्रिया तपाईंको शरीरमा रहेको प्रक्रियाले यसलाई अन्य मेथिलाइटेड स्टेरियोड्सबाट अलग बनाउँछ।
टेस्टोस्टेरोन Undecanoate शरीर निर्माण
टेस्टोस्टेरोन यौन हार्मोन शरीर मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभािन्छ वसा को खोने को लागि, शक्ति र अन्य पुरुष सुविधाहरु को बीच मांसपेशिहरु को निर्माण को लागि। धेरै पेशेवर एथलीटहरू र सौन्दर्य बस्तीहरूले यस माटोको फाइदा उठाउँछन् कि उनीहरूको मांसपेशिहरु बढाएर साथै उनीहरूको प्रदर्शनमा सुधार गर्दछ। यद्यपि टेस्टोस्टेरोन अडिनेटोनेटलाई कमजोर स्टेरॉइड भनिन्छ, यसले तपाईंको मांसपेशी भवन र workouts मा सकारात्मक नतिजा पाउन सक्छ जब तपाईं उपयुक्त आहार संग उच्च खुराक लिनुहुन्छ।
यद्यपि, जो लागू औषध प्रयोग नगर्नेहरूले सही साइड इफेक्टहरूको अनुभव गर्नेछन् भने तपाईले आफ्नो चिकित्सकलाई समय समयमा सम्पर्क गर्नुहुनेछ। टेस्टोस्टेरोन अज्ञात शरीर सौष्ठव यदि तपाईं टेस्टोस्टेरोन अज्ञात इंजेक्शनको लागी जान सक्नुहुन्छ भने तपाई केवल एकपटक 10 वा 14 हप्तामा मात्र लिन सक्नुहुनेछ। तपाईंको हालतमा निर्भर गर्दछ कि डाक्टरले खुट्टा डिजाइन र सही टेस्टोस्टेरोन अज्ञात चक्र तपाईंको लागि डिजाइन गर्दछ। टेस्टोस्टेरोन अज्ञात आधा-जीवनको कैप्सूल खुसी एक दिनको लागि मात्र दौड्छ, र तपाईंलाई दैनिक खुवाउनु पर्छ।
टेस्टोस्टेरोन Undecanoate लाभ
मुख्य टेस्टोस्टेरोन अण्डकेनोएट फाइदाहरू मध्ये केही;
मोटो हानि सुधार
आफ्नो विश्वास बढाउनुहोस्
सेक्स ड्राइव सुधार गर्नुहोस्
मांसपेशियों को लाभ मा सुधार
टेस्टोस्टेरोन Undecanoate डोजजहरू
बडिबिल्डरहरूको लागि वा प्रति दिन 480mg को आसपास टेस्टोस्टेरोन अज्ञात खुराक रेंज को एथलेट गर्दछ। तथापि, पहिलो-पटक प्रयोगकर्ताहरूको लागि, डाक्टरले खुट्टा कम गर्न सक्दछ र त्यस समयमा यसलाई बढाउन सक्छ। जब तपाईले अन्य स्टेरियोड्ससँग दबाइलाई मिलाउनुहुन्छ भने, 200-250mgs राम्रो हुनेछ। नाक र रातो खाना खाने भन्दा पहिले खाना खाने भन्दा पहिले औषधि लिनु पर्छ।
टेस्टोस्टेरोन Undecanoate चक्र
तपाईं यस अन्य स्टेरॉयड जस्तै डेराबोलिन, ट्रेनबोलोन र प्रोमोबोलन जस्ता अन्य शरिरको साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ अन्य मौखिकसँग एन्ड्रियाल प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, त्यसपछि यसलाई कम खुट्टाहरूमा 240mg प्रति दिन प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ। एन्ड्रिलले परीक्षण आधारको रूपमा सेवा गर्नेछ र अन्य मौखिकहरूलाई कुनै अतिरिक्त दुष्प्रभावको अनुभव बिना ठीक काम गर्न मौका दिन्छ।
हप्ताको Andriol Promobolan Aromasin Cardarine N2Guard
1 250mg / ED 600mgs / हप्ता 10mgs 20mgs / ED 5caps / ED
2 250mgs / ED 600mgs / हप्ता 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
3 250mgs / ED 600mgs / हप्ता 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
4 250mgs / ED 600mgs / हप्ता 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
5 250mgs / ED 600mgs / हप्ता 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
* ईडी प्रति दिन वा हरेक दिन हो
10। टुरिनाबोल (Tbol)
यो एक एनाबोलिक औषधि हो जुन सुरुमा ईस्ट जर्मनीमा 1961 मा औषधि जेनाफार्म कम्पनीले हड्डी बर्बाद गर्ने रोगको उपचारका लागि उत्पादन गरिएको थियो। 1960s को 1980s मा पूर्वी जर्मन ओलम्पियन सफलता को लागी औषधि को लोकप्रियता प्राप्त भयो। टर्निबोल हाल एथलीट र बडी बङ्गलादेशहरूले प्रयोग गरी उनीहरूको शरीरको मासु र मांसपेशिहरु सुधार गर्ने ऊर्जाको साथमा उनीहरूलाई उनीहरूको गतिविधिमार्फत ड्राइभ गर्न आवश्यक ऊर्जाको साथ प्रयोग गरिन्छ। बडिबिल्डरका लागि, यदि तपाई औषधीको सही प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईले असामान्य लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
कसरी गर्दछ टोरिनबोल काम गर्दछ
ट्युरिनबोल खुराक मात्र मौखिक क्याप्सूल फारमको लागि उपलब्ध छ। वर्तमानमा, यस स्टेरोइडको लागि कुनै ईन्जेक्शन योग्य फारम छैन। त्यहाँ छैन बिक्री को लागि TURINABOL, र औषधी केवल भूमिगत ल्याबहरूमा उपलब्ध छ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रदान गर्ने ट्युरिनबोल प्रभावहरूलाई ध्यानमा राख्दै औषधिको माग बढिरहेको छ। यो औषधि मांसपेशी प्रोटीनको संश्लेषण सुधार गर्न, मांसपेशीहरूमा नाइट्रोजन शोषण दरको मात्रा सुधार गर्न र रातो रक्त कोषहरूको उत्पादन बढाउनमा प्रभावकारी हुनको लागि परिचित छ। ट्युरिनबोल तपाईंको आवश्यकतामा निर्भर गर्दछ, तर तपाईं प्रति हप्ता वा दुई हप्ता 50०mg लिन सक्नुहुनेछ। यद्यपि तपाईको स्वास्थ्य स्थिति विचार गरे पछि तपाईको डाक्टरले तपाईको लागी उत्तम डोज चक्र डिजाइन गर्न सक्दछ।
टुरिनाबोल (Tbol) धेरै एथलीटहरू र बॉडीबिल्डर्सको लागि सबैभन्दा राम्रो स्टेरोइडको रूपमा बाहिर खडा छ किनभने यसको शक्ति स्तर र मांसपेशी वृद्धि बढाउनमा यसको ठूलो फाइदाहरू छन्। सही आहार र उचित कसरतको साथ औषधीको साथ तपाईले वांछित परिणामहरू प्राप्त गर्न निश्चित हुनुहुनेछ। स्टेरोइडले तपाईंको शरीरलाई आवश्यक प्रोटीनहरू प्रदान गर्दछ जसले मांसपेशिहरूको विकास गर्न र शरीरको बोसोहरू बर्न सक्षम गर्दछ। यो औषधि प्रयोग गरेर, तपाईंले ईस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्टहरू जस्तै अनिद्रा, पानी प्रतिधारण, र उच्च रक्तचापको बारेमा चिन्ता लिनुपर्दैन। तसर्थ, जो दुष्प्रभावको खतरामा तिनीहरू यस औषधिको साथ सहज छन्।
केहि ट्युरिनाबोल फाइदाहरू तपाईंले यस औषधि प्रयोग गरेर आनन्द लिनुहुनेछ;
मांसपेशिहरु लाई बलियो बनाउनुहोस्
कडा मांसपेशिहरु प्रदान गर्नुहोस्
वजन प्राप्त नगरी परिणामहरूको आनन्द लिनुहोस्
कम साइड इफेक्ट्स
टेस्टोस्टेरोन हार्मोनको प्राकृतिक उत्पादन सुधार गर्नुहोस्
पुरुषहरूको लागि सिफारिश गरिएको टुरिनाबोल खुराक प्रति दिन २० देखि g० ग्राम छ, र तपाईं यसलाई अन्य परिणामहरूको साथसाथै राम्रो परिणामको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ गलत धारणा रहेको छ कि बडि बिल्डरको रूपमा तपाईले नतीजा प्राप्त गर्न उच्च खुराक प्रयोग गर्नुपर्नेछ। महिलाहरूले दिन प्रति दिन २. to देखि .20.m मीग्रा को सानो टुरिनाबोल खुराक लिनु पर्छ किनभने उच्च खुराकले भाइरलाइजेशन गर्न सक्छ।
Turinabol आधा जीवन
टुरिनाबोल (Tbol) को आधा जीवन १ 16 घण्टा छ। यसैले तपाईले एक पटक तपाईको डोज एक दिन लिनु पर्छ - जे होस्, केहि बॉडीबिल्डरहरु लाई डोजलाई दुई १२ घण्टाको अन्तरालमा विभाजन गर्नु जुन आदर्श रगतको स्तर राख्न पनि ठीक छ।
यो स्टेरॉइड Dbol, N2 ग्यारर्ड, र Cardarine जस्तै राम्रो परिणामहरूको लागि अन्य मौनहरूसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ र साइड इफेक्टहरू कम गर्न।
हप्ताको Tbol Dbol N2Guard Cardarine
* ED हरेक दिनको लागि खडा छ।
कुन टेस्टोस्टेरोन एस्टेर तपाईंको लागि सही छ?
अब तपाईसँग बजारमा उपलब्ध सबै भन्दा राम्रो टेस्टोस्टेरोन एस्टेर्सको झलक छ, अब चुनौती तपाईंको लागि सही एक निर्धारण गर्नमा आउछ। विभिन्न औषधिहरूमा मानिसहरूसँग विभिन्न प्रतिक्रियाहरू छन्, तपाईंको मित्रको लागि के काम गर्न सक्दछ कि तपाईंको लागि पूर्ण हुन सक्दैन। मानिसहरूसँग फरक शरीरको रचनाहरू छन्, र एक राम्रो डाक्टरले तपाईलाई पहिलो दबाइलाई सही दबाइ चयन गर्नु पहिले तपाईको अवस्थाको जाँच गर्नेछ।
कम टेस्टोस्टेरोन समस्याले इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न व्यक्तिगतकृत उपचारको आवश्यकता पर्दछ। उदाहरणको लागि, यदि तपाईं मानिसहरूको धारणा अनुसार जान्नुहुन्छ भने, केहिले तपाईंलाई बताउनेछ कि एसीटेट सबैभन्दा राम्रो छ, अरूले तपाईंलाई साइप्रियोनेट वा डिकोनोरेट किनेका लागि पनि सन्दर्भ गर्नेछ। सही टेस्टोस्टेरोन एस्टर्स छनौट गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका एक डाक्टर हेर्न र तपाईंको समस्या बुझाइरहनु हुन्छ त्यसपछि उसले सही औषधिको वर्णन गर्नेछ।
तपाईंको लागि सही टेस्टोस्टेरोन एस्टर छनौट गर्ने सुझावहरू के हो?
हरेक बिल्डरबिल्डरको सपना एक राम्रो लगाउने आकार, समग्र शरीर फिटनेस, र बलियो दुबला मांसपेशिहरु हुनु हो। तथापि, शरीरमा कम टेस्टोस्टेरोन उत्पादन जस्ता केही अवस्थाहरूले तपाईंलाई तपाईंको क्यारियरमा सफल हुने मौकालाई निम्त्याउन सक्छ।
बडिबिल्डरहरूको अधिकांश टेस्टोस्टेरोन एस्टेटरले मांसपेशिहरु प्राप्त गर्न को लागी उनीहरुको कडा व्यायाम दिनचर्या पछि चाहिन्छ। सामान्यतया, तपाईंको शरीरमा तपाईंको मांसपेशीहरू निर्माण गर्न पर्याप्त टेस्टोस्टेरोन छैन र तपाईंलाई शरीर बिल्डरको रूपमा आवश्यक ऊर्जा प्रदान गर्न। तपाईंले उपयुक्त एस्टरको साथ उनीहरूलाई बढावा दिनको लागि अर्थ चाहिन्छ।
त्यसोभए तपाई कसरी दायाँ टेस्टोस्टेरोन एस्टर छनौट गर्नुहुन्छ?
वर्तमानमा, बजार विभिन्न टेस्टोस्टेरोन एस्टरबाट भरिएको छ जुन यसले तपाईंलाई उत्तम छनौट गर्न कठिन छ। सबै ब्रान्डहरू सबै भन्दा राम्रो हुने र तपाईंको समस्याको समाधान प्रस्ताव गर्ने दावी गर्छन्। तथापि, तपाईंलाई सायद सावधान रहनु आवश्यक छ कि तपाई एक स्वास्थ्य पेशेवरबाट मद्दत खोज्नुहुन्छ। दायाँ टेस्टोस्टेरोन बूवाहरू चयन गर्दा निम्न सुझावहरू विचार गर्नुहोस्;
1. तपाईलाई के बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहोस्
तपाइँ आफ्नो सल्लाहलाई सल्लाह दिनु अघि डाक्टरले पहिला तपाईंको समस्या बुझ्दछन्। उदाहरणका लागि, यदि तपाईंको समस्या आवश्यक दुबला मांसपेशीहरू प्राप्त गर्न असक्षम भएको छ वा तपाईं आफ्नो शरीरको बोसो जलाउन चाहानुहुन्छ जुन तपाईंको डाक्टरको कामले तपाईंको लागि उत्तम ड्रग पहिचान गर्न सजिलो बनाउनेछ। टेस्टोस्टेरोन एस्टेर्सले विशेष समस्या समाधान गर्न विभिन्न अवयवहरू छन्। अन्य व्यक्तिहरू विभिन्न रोगहरूका लागि औषधि अन्तर्गत एकदम सही छन् र अरू अन्य औषधिहरूसँग प्रयोग हुँदैनन्। औषधि खरिद गर्नाले तपाईंको नजिकको पसलबाट स्वास्थ्य पेशेवर निर्देशन बिना गल्ती नगर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो जीवनलाई जोखिममा पार्ने प्रभावहरू अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ किनभने तपाइँ आफ्नो जीवन जोखिममा पार्नुहुनेछ।
2। टेस्टोस्टेरोन एस्टरको प्रकार
यो टेस्टोस्टेरोन ब्रोकरहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन् जुन प्राकृतिक हुन्छन् र अन्य औषधिहरू छन्। तपाईंको डाक्टर तपाइँको स्वास्थ्य अवस्थाको जाँच पछि तपाईंलाई राम्रो प्रकार निर्धारण गर्न निर्धारित गर्न राम्रो स्थितिमा हुनेछ। यो औषधी लिँदा तपाईंको शरीरको बल महत्त्वपूर्ण छ; तपाईंको शरीरले केहि पूरक संग राम्रो काम गर्दैन। फेरि तपाईंको टेस्टोस्टेरोन आवश्यकताको आधारमा, चिकित्सकले तपाईंको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्नको लागि सही प्रकारलाई थाहा पाउनेछ।
3। गुणस्तर र प्रभावकारिता
टेस्टोस्टेरोन एस्टरले यस्तै काम गर्दछ, तर फरक फरक हुन्छ। विभिन्न ब्रान्डहरू फरक आधा जीवन छन्, केही हप्तामा एकपटक हप्तामा एकपटक2वा3दिनमा लिन्छ। तपाइँका आवश्यकताहरु तपाईका लागि उज्ज्वल नुस्खा छनौट गर्न आफ्नो चिकित्सकलाई मार्गदर्शन गर्नेछ। यदि तपाईं इंजेक्टेबल टेस्टोस्टेरोन एस्टर संग सहज छैन भने, तपाईं मौखिक औषधको खोजी गर्न आफ्नो चिकित्सकलाई बताउन सक्नुहुन्छ।
जब तपाइँ टेस्टोस्टेरोन प्रवाटर छनौट वा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टिप हरेक चरणमा तपाईंको डाक्टर समावेश गर्न चाहन्छ। साइड इफेक्ट्स को खजाना महसुस हुन सक्छ र कहिलेकाँही तपाईं स्थिति रिवर्स गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईं सस्ता उत्पादनको लागि जानुहुन्छ भने कम-गुणस्तर उत्पादनहरू प्राप्त गर्न सम्भव छ जब दायाँ टेस्टोस्टेरोन एस्टरहरू चयन गर्दा मूल्य कहिल्यै प्राथमिकता नदिनुहोस्। तथापि, ड्रगको लागी पनि तपाइँको बैंक तोक्नुहोस्, तपाइँले चाहानु भएको परिणामहरूको प्रभावकारीता र गुणस्तरलाई विचार गर्नुहोस्।
डडले, आरई, र कन्स्टान्टिनाइड्स, पीपी (२०१ 2018)। एस पेटेंट आवेदन संख्या 15 / 723,985.
गुउरिया, सी।, सियानिकुलो, पी।, र पोर्टे, सी (२०१ 2017)। तरल क्रोमाटोग्राफी-उच्च रिजोलुसन मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा मांसपेशिहरूको पाचन ग्रंथिमा टेस्टोस्टेरोन फ्याटी एसिड एस्टरको विश्लेषण। स्टेरियोड्स, 123, 67-72।
चेन, एफजे, पटेल, MV, Fikstad, डीटी, Zhang, एच, र गिलियार, सी (२०१ 2018)। एस पेटेंट आवेदन संख्या 15 / 714,541.
१० चीजहरू जुन तपाईंले DMAA लिनु अघि थाहा पाउनुपर्दछ	तपाईंले बिक्रीको लागि Dianabol पाउडर बारे सबै जान्न आवश्यक सबै कुरा